Sheekh Xasan Al-Banna: Dheemankii Qarniga miyuu ahaa?- Q.8aad | Somaliwayn	Home
Monday, May 23rd, 2016 | Posted by Nuur | 842 views	Sheekh Xasan Al-Banna: Dheemankii Qarniga miyuu ahaa?- Q.8aad
Xasan Al Banna iyo doorkii caqiidada
Rabbi ha janneeye waxa uu qoray qoraal uu si xeeldheer ugu soo dhawaynayo fahanka caqiidada oo la yidhaa “Caqaa’id”. Waxa uu u kala falkaya dhadhaarada ay leeyihiin, waxa uu dul istaagaya arrimaha lama dhaafanka ah isaga oo kor ka xaadin iyo saafidba ku sheegaya. Kolka aad u kuur gasho qaabqoraalkiisa carabigu waa mid aad u sarreeya, sona godliya dhawaanshaha fahanka. Sida uu iskula helayo erayada maanku jeclaysto iyo sida erayba eray kugu dhiibayo ayaad gunta ka soo taabanaysa dulucda qoraalkiisa.
Caqiiqada uu sharaxaya ee uu haystay waa caqiidadii ay ku sugnayeen saddexdii qarni ee Suubbanuhu ammaanay ee Cabdillaahi ina Mascuud warinayo, Bukhaari iyo Muslinna soo saareen; “Qarniyo waxa u gobsan oo u khayr badan qarnigayga, ka ku xigaa khayrka ku xiga, ka ku sii xiga xagga khayrka ku sii xiga.”
Waa caqiido sugaysa in Ilaahay SWT loo sugo; magacyadiisa iyo sifooyinkiisa uu leeyahay oo aan tashbiih iyo ta’wiil midna lagu samayn. Caqiiqada sheekh Banna Rabbi ha janneeye waa in addoonku garto in Korreeye yahay kaligii oo aanay jirin cid wax la wadaagta oo uu kali la yahay rabbinimadiisa, magacyadiisa, sifooyinkiisa iyo ficilkiisaba. Oo ay tahay in addoonku dhabaysto oo rumaysto in Alle SWT yahay ka kaligii wax abuura ee isagu mulkiya kuna tasarufa ee ay u dhammaystiran tahay daatooyinkiisa iyo ficilkiisuba ee wax walba og ee wax walba koobay ee gacantiisa ay ku jirto boqortooyada iyo lahaanshaha kownka.
Dilkii Naqraashi iyo hadalkii Imaamka
Kolkii uu taabo galay Ikhwaanku wuxu samaystay unug dhallinyaro oo xuuraan doon ah. Isla xilligaa ayuu Maxamuud Naqraashi Baasha oo raysalwasaare ka ahaa Masar ku dhawaaqay mamnuuciddii Ikhwaanka. Wiil dhallinyaro ah ayaa ka gadooday dhawaqa Naqraashi ka soo yeedhay, ka dib xabbad uu ku dhuftu u god galay Naqraashi.
Imaam Banna Rabbi ha janneye markii u maqlayba qoraal buu soo saaray uu ku dedifaynayo waxa dhacay dhaqdhaqaaqana ka bari yeelaya inu lug ku lahaa. Isaga oo ka hadlaya wuxu yidhi; “Ikhwaanku lug kuma lahayn falkaa dhacay, cidda dishayna kama mid aha Ikhwaanka.”
Dilkii Imaam Banna
Dilkii Naqraashi ka dib culays badan baa soo fuulay dhaqdhaqaaqan, ilaa la sheego dilka Imaamku inu daba socday aargudasho looga aar gudayey Naqraashi.
12/2/1949 ayey ahayd kolkii ifka laga qariyey godka lagu janne. Dil qorshaysan ayaa ciidammadii Jamaal Cabdinaasir ay laami dhexdeed ku toogteen sheekh Banna.
Culimadii ammaantay Imaam Banna
Culimadii iyo haldoorkii Muslimiinta ee ammaanay imaamku aad ayey u badan yihiin, halkanna ku soo wada koobi kari mayno. Ragga ammaanay waxa ka mid ah Callaama Xasan Nadawi, “Imaamku wuxu ahaa; Daaci, mujaahid, macallin, iyo murabbi dadka tarbiyadeeyey.”
Sida oo kale waxa ammaanay sheekhii xadiiska Albaani, “Haddii aannu jirin Xasan Al-Banna, dhallinyar badani sinimooyada iyo makhaayadaha ayey wakhtigooga ku lumin lahayeen.” Sida oo kale waxa ammaanay; Callaama Qaradaawi, Sayid Saabiq, Bakar Abu Sayid, iyo culimo aynaan halkan ku soo wada koobi karin.
Qeybaha kale halkaan ka baaro (Guji/Riix)
Waxaa Qoray: Sheekh Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan-Rakuub)
Short URL: http://somaliwayn.org/?p=32967